Mkpụrụ | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Lychee: ọdịnaya nke calorie, ngwugwu, uru na nsogbu
Mkpụrụ osisi ndị na-amị mkpụrụ na-abanye n'ime ndụ anyị. Ọ bụrụ na mbụ anyị nwere mkpụrụ osisi mkpọ ("mmanya okpomọkụ", "painiapị na ihe ọṅụṅụ anyị", wdg), ugbu a na nnukwu ụlọ ahịa ọ bụla i nwere ike ịzụta mkpụrụ ọhụrụ site na nsọtụ ọzọ nke ụwa. Anya na - ekpuchi - ihe ngosi nke na - eji ihe oriri na - ekpo ọkụ na - ejupụta n'ụdị agba, okpukpo, ụdị dị iche iche.
Otu esi akpo osisi di n'ulo iji chekwaa uru bara uru
Ndị na-eto eto na-ewu ewu na nri ma dị mma maka ahụ ike. Otú ọ dị, mgbe ị na-azụ mkpụrụ osisi mịrị amị, ọ dịghị ihe doro anya na e nweghị ndị nchebe, pesticides na ọgwụ ndị ọzọ, ma ha abụghị ọnụ ala. Na oge, ego nke plums ọhụrụ adịghị elu, ya mere, anyị ga-achọpụta ụzọ isi họrọ ụzọ ziri ezi isi akọrọ na otu esi echekwa prunes n'ụlọ.
Banana: ole calorie, ihe dị, ihe dị mma, onye na-enweghị ike iri
A pụrụ ịchọta banka na shelves n'afọ niile, ebe ọ bụ ọnụ ala, tọrọ ụtọ ma dị mma. A na-eji ya eme ihe ọ bụghị naanị maka nri nri na dị ka ihe ntinye na desserts, kamakwa maka ihe ịchọ mma, nke mmadụ ole na ole maara. Ka anyị lebakwuo ngwaahịa ahụ anya. Calorie na uru bara uru Na ndị na-eme egwuregwu, a na-ewere banana dị ka nri zuru ezu, na ihe niile n'ihi ụba bara uru.
Kiwi: bara uru ma ọ bụ na-emerụ ahụ? Ngwa na mmetụta na ahụ
Kiwi - otu n'ime osisi osisi ndị kacha baa uru, nke mere wee detụ ọtụtụ ndị ụtọ. O nwere nnukwu ihe oriri na-edozi ahụ, ihe dị iche iche a na-ahụkarị na mbụ na-enwetakwa ngwa ngwa na-emepụta ihe ndị dị na ya. Otú ọ dị, uru bụ isi nke kiwi bụ ihe bara uru, nke anyị na-akọwa n'isiokwu a.
Otu esi elekọta ubi hydrangea: gịnị mere na anaghị agba oge, otú e si agbanwe agba na ihe ndị ọzọ
Akwa-mkpụrụ na oyi na-eguzogide dịgasị iche iche - mkpụrụ vaịn Alex
Adromiscus - obere ọrụ ebube nke ezinụlọ